Tag: rfm nyocha | Martech Zone
Tag: rfm nyocha
Otu n'ime ihe kachasị mkpa maka azụmaahịa ọhụụ ma ọ bụ nke guzosiri ike bụ ijide n'aka na ha nwere ego na-agbanwe agbanwe. N'agbanyeghị ụdị azụmahịa ị nọ na ya, ndị ahịa na-alọghachi bụ ụzọ magburu onwe ya iji mee ka ego na-akwụsi ike. Akụkụ nke nke a bụ na ndị ahịa ga-efu oge oge. Iji mezie ihe funahụrụ, azụmaahịa nwere ike ịme ihe abụọ: Nweta ndị ahịa ọhụụ Mee atụmatụ iji nwetaghachi ndị ochie. Ọ bụ ezie na ha abụọ bụ